Warbixin:Afrika Waxay u Baahan tahay Inay Somaliland kaga Dayato Doorashooyinka | Salaan Media
June 18, 2021 | Published by: Hamse
John Githongo oo ah siyaasi reer Kenya ah, kana mid ahaa goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee ka qayb-galay doorashooyinkii isku sidkanaa ee Somaliland ka qabsoomay 31-kii Bishii May, 2021, ayaa sheegay in dhammaan qaaradda Afrika ay u baahantahay in ay Somaliland kaga dayato hannaanka doorashooyinka iyo dimuquraadiyadda.
John Githongo waxa uu sheegay in uu goobjooge ka soo noqday doorashooyin tiro-badan oo ka qabsoomay dalalka qaaradda Afrika, isla markaana uu kormeeraykiisa ku xaqiijiyay waxyaabo badan oo ay Somaliland kaga duwantahay dalalka Afrika, isla markaana ay jiraan waxyaabo u gaar ah hanaanka dimuquraadiyada iyo doorashooyinka Somaliland.
Warbaahinta Busiweek ayaa baahisay hadalkan ka soo yeedhay siyaasi John Githongo, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay sidan:- “Somaliland waxay hirgelisay doorashadeedii (Baarlamaanka iyo Deegaanka) oo isa saran, markii ugu horraysay 31 May, 2021, iyadoo loo maray hannaan nabadeed, doorashadaasi oo horseeday in ay ku soo baxaan hogaamiyeyaal cusub oo dhalinyaro ah, isla markaana firfircoon.
Doorashada Somaliland waxaa soo dhoweeyey goobjoogayaasha caalamiga ah oo ku tilmaamay mid ka mid ah hannaanka doorashada ugu daah-furnaanta badan, caddaaladda badan, kalsoonida badan, isla markaana ugu nabdoon ee qaaradda Afrika lagu qabtay.
Marna ma jirin wax rabshado ah oo ka dhacay doorashooyinkii Somaliland ka qabsoomay, sidoo kale may jirin wax sheegasho iyo cabasho ah oo ku saabsan wax is-daba marin. Sidoo kale, waxa cajiib ahaa, Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa had iyo jeer diyaar u ahaa inuu warbixin siiyo kormeerayaasha iyo saxaafadda.”
John Githongo ayaa sheegay in goob-joogayaashii caalamiga ahaa eek a qaby galay doorashada Somaliland ay layaab ku noqotay sababta caalamku u aqoonsan la yahay heerka dimuquraadiyaddeed ee Somaliland, waxaanu yidhi “Tani waa wax u baahan in lagaga daydo oo dhammaan qaaradda Afrika oo dhami ay kaga daydaan,” ayuu yidhi Githongo oo ka hadlayey golaha cusub ee baarlamaanka Kenya iyo Somaliland ee dhawaan laga bilaabay magaalada Nairobi isaga oo intaas ku daray in kormeerayaashu ay la yaaban yihiin sababta ay Somaliland weli u aqoonsan la’yahay caalamku heerkaas dimuqraadiyaddeed iyo abaabulka ah.”
Warbaahinta Busiweek, ayaa sidoo kale warbixinteedan ku soo qaadatay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, mar uu ka hadlayay doorashada Somaliland iyo ixtiraamka caalamiga ah ee ay dalka u soo jiiday, “Goob-joogayaasha caalamiga ahi waxay la yaabeen markii ay arkeen xubnaha xisbiyada kala duwan ee safka ugu jira inay codeeyaan, halka ay ku faraxsanyihiin shucuurta dadweynaha ee aad moodo in ay u eegtahay sida xafladaha oo kale.”
Madaxweynaha Somaliland waxa uu ku ammaanay guddida doorashooyinka shaqo si fiican loo qabtay oo ka wareerisay dhamaan asxaabta iyo cadawga dadlkooda, iyo hannaanka maaraynta abaabulkooda. Isaga oo tilmaamay in hawlkarnimada masuuliyiinta KDQ ay ahayd wax aad loola yaabo isla markaana sumcad weyn ku yeeshay halkan iyo dibeddaba, Madaxweynaha ayaa si hufan u bogaadiyay go’aanka KDQ ee ku dhawaaqista natiijooyinka hordhaca ah ee heer degmo ee codbixinta madaniga ah.
Wuxuu sheegay in tallaabadaasi ay culeys badan iyo walaac badan ka rartay sidaa darteedna ay ku xirdhay aaminaad iyo qirasho.
Madaxweynuhu wuxuu si gaar ah u bogaadiyey daneeyayaasha oo ka bilaabaya dadweynaha iyo xisbiyada siyaasadeed, hay’adaha amniga iyo abaabulka guud ee habsami u socodka howsha waqtigeeda, deg deggeeda, nabadeynta iyo xaqsoorka iyo natiijadiisa.
Madaxweyne Biixi wuxuu yidhi markii ay dhammaatay xilligii doorashada, hoggaamiyeyaasha cusub ee la doortay iyo muwaaddinka waa inay hadda dib ugu soo noqdaan shaqadii dhismaha qaranka.
Dawladda Somaliland waxay ku maalgelisay dhammaan howlaha doorashada iyadoo keliya boqolkiiba 15 boqolkiiba USD 20 milyan ay ka timid saaxiibbada caalamiga ah.
“Doorashooyinku waxay fureen baal cusub oo dimuqraadiyadda qarankeena ah waxaanay ka kasbatay ixtiraam iyo ictiraaf adduunka oo dhan,” ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland, waxaanu intaasi raaciyay “Waxaanu adduunka tusnay in wax weyn ay ka soo bixi karaan Geeska Afrika. Waxaan adduunka tusnay in aanu qaban karono waxa aanu u jeedno.”